लोप हुने हो कि मितेरी साइनो ! कसरी बन्छ त मित ? - पब्लिक पाेष्ट
उहाँको मितिनीको नाम प्रमिला थापा हो ।
श्रेष्ठले थप्नुभयो, “हाम्रो घरमा दूध पु¥याउन आउने आमाको पनि एक जना छोरी र म पनि एक्ली छोरी भएका कारण आमाले मित लगाइदिएको भन्नुहुन्थ्यो । ” उहाँले दशैँ, तिहारमा मितिनीको घर जाने, रमाइलो गर्ने गरेको स्मरण गर्नुभयो । पछि मितभाइ जन्मेपछि मेरो भाइ नभएकाले उनैलाई भाइटीका लगाउँदा अझै रमाइलो हुन थाल्यो । मेरो बिहे भयो, पछि मितिनीको पनि बिहे भयो, त्यसपछि भने भेटघाट हुन छाड्यो, श्रेष्ठ पुराना दिन स्मरण गर्नुहुन्छ ।
मित साइनोलाई धेरै महìवपूर्ण रूपमा हेर्नुहुन्छ, ७३ वर्षीय लालबहादुर कार्की । उहाँले आफूले मितज्यूबाट धेरै मद्दत पाएको र उहाँसँगको सङ्गतमा धेरै रमाइलो गरेको अनुभव सुनाउनुभयो । कार्की भन्नुहुन्छ, “२० वर्षको उमेरमा मधेसीमूलका युवकसँग मित लगाएको थिएँ, तराई जाँदा नराम्ररी बिरामी परेकाले मितज्यूले नै मद्दत गरी घरमा आश्रय दिएर मेरो उपकार गरिदिनुभएको थियो । ”मित लगाउनु भनेको मित्रतालाई बलियो एवं दिगो बनाउने प्रयास हो ।
अनुहारको रूपरङ्ग, जातधर्म, वेशभूषा, उमेर आदिजस्ता कुनै पनि कुरा मित गाँस्ने सन्दर्भमा बाधा बन्दैनन् । “मित मन र भावनाको सम्बन्ध हो, सामाजिक व्यवहारको सम्बन्ध हो, जीवन अगाडि बढाउने क्रममा सुखदुःखलाई साझा भोगाइमा ल्याएर जीवनको मिठास बाँड्ने सम्बन्ध हो,” उहाँले भन्नुभयो । विज्ञान विषयमा प्रमाणपत्र तह अध्ययनरत अन्जना अधिकारीलाई ‘मित साइनो’ भनेको के हो थाहै छैन । उहाँले भन्नुभयो, “गीत त सुनेको थिएँ तर मित भनेको के हो थाहा छैन । ”
मित वा मितिनीका पति तथा पत्नीलाई पनि मित र मितिनी नै भनेर सम्बोधन गरिन्छ । त्यस्तै मितदाइ, मितभाइ, मितिनीदिदी वा बहिनी, मितबा, मितिनीआमा जस्ता साइनो पनि नेपालीबीच प्रिय छन् ।
यस्ता साइनो नेपाली समाजको जरासम्म भिजेको पाइन्छ । संस्कृतिविद् जोशीले नेपाली संस्कृतिले मितेरी सम्बन्धलाई ठूलो मानेको कुरा स्वस्थानी व्रत कथाबाट थाहा पाउन सकिने बताउनुभयो । त्यसमा व्रतालुले स्वस्थानीको प्रसाद सकेसम्म छोरा नभए मितछोरालाई दिनू भनेर मितेरी सम्बन्धको महìव उजागर गरेको छ ।
कैलालीमा प्रेमीसँग मिलेर श्रीमानको हत्या
June 26, 2018 EP EDITOR
नवीकरणबिनै स्वास्थ्य सेवा, प्रशासन रमिते
May 31, 2018 EP EDITOR
December 1, 2018 EP EDITOR